चीनमा सार्वजनिक स्थलमै प्रहरीले महिलाले लामो लुगा लगाएर हिडेको भेटेपछि का’ट्न थाल्यो ! – Sanjal Nepal
Homeरोचकचीनमा सार्वजनिक स्थलमै प्रहरीले महिलाले लामो लुगा लगाएर हिडेको भेटेपछि का’ट्न थाल्यो !
November 4, 2020 admin रोचक 9686
पहिरनले मानिसको व्यक्तित्व झल्किन्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियामा अझ मुस्लिम महिलाले त निकै लामा पहिरन लगाउँछन् ।
लामो पहिरन लगाउन भनिन्छ पनि । मुस्लिम महिलालाई लामो र पुरै शरीर ढाक्ने पहिरन लगाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
अहिले पनि मुस्लिम महिला बुर्का लगाउँछन् । आफ्नो धर्ममा प्रचलित यो नियमलाई पालन गर्नु आज पनि मुस्लिम समुदायमा राम्रो मानिन्छ ।
तर यस्तो एउटा देश छ जहाँ महिलाले लामो कपडा लगाए सरकारले नै का’टी दिन्छ वा छोटो बनाइदिन्छ । चीनको शिन्कियाड। प्रान्तमा बस्ने बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगुर मुसलमान माथि त्यहाँको सरकारले महिलाहरुलाई लामो कपडा लगाउन रोक लगाएको छ ।
यदि यो नियम विपरित कुनै महिलाले लामो कपडा लगाएको पाइए त्यसलाई तत्काल का’टेर छोटो बनाइने छ ।
मुस्लिम महिलाको लामो पोशाक र बुर्काले उनीहरुलाई काम गर्न र हिडढुल गर्न असअज भएकाले आधुनिक समयमा धर्मका नाममा दैनिक असहज हुने लुगा नलगाउन् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको सरकारको दाबी छ ।
‘डकुमेटिक अपरेशन एगनेष्ट मुस्लिम संगठन’का अनुसार उनीहरुलाई लाग्छ उइगुर मुस्लिम महिलाहरुको पोशाक धेरै लामो भएकोर बध्यताले यस्तो नियम लमगु गरेका हुन् ।
शिन्कियाड। प्रान्तमा बस्ने मुस्लिम समुदायका उइगुर मुसलमानमाथि पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
December 10, 2020 admin रोचक 4915
November 21, 2020 admin रोचक 3609
February 4, 2021 admin रोचक 2856